भूकम्पपीडितको रोदन 'जीवनभरको कमाइ स्वाहा भो' - Nepal News - Latest News from Nepal
काठमाडौं : नौ वर्षअघि घर बनाउँदा कुशादेवी ४ स्थित बोलखेगाउँ खर्कका रामकृष्ण लामिछानेको खुसीको सीमै थिएन। किसानी गरेर बचत गरेको पैसा खर्चेर उनले जस्ताको छाना हालेर दुईतले घर बनाएका थिए।
उनले घरलाई अझै राम्रो देखाउन आँगन र पिँढी ढलान गरेर चिटिक्क पारेका थिए। वैशाख १२ गते गएको भूकम्पले उनको घर पूर्ण ध्वस्त भो। घर लडेपछि उनी मूर्छित भए। त्यो पीडा उनका लागि जीवनकै ठूलो बन्यो।
‘मेरो सर्वस्व गुम्यो। जीवनभरको कमाइ स्वाहा भो’, गहभरि आँसु बनाउँदै उनले दु:खेसो पोखे, ‘खाईनखाई बचत गरेको पैसाले निकै दु:खले घर बनाएको थिएँ। यस्तो महँगीमा अब कसरी घर बनाउन सक्नु?’
उनीमात्रै होइन। पुरै गाउँलेको अवस्था उस्तै छ। त्यहाँका अधिकांश स्थानीय कृषिमा निर्भर छन्। गाउँ पूरै ध्वस्त भएका छन्। घर भत्किएपछि पीडा बोकेर खुल्ला आकाशमुनि रात बिताइरहेका छन्।
भूकम्पपीडितलाई तत्काल राहत पुर्‍याउन अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कले सञ्चालन गरिरहेको अन्नपूर्ण राहत अभियान लिएर पीडितमाझ पुगेका टोलीसँग उनीहरूले आफ्ना पीडा राज्यको माथिल्लो निकाय सम्म पुर्‍याइदिन आग्रह गरे।
अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष रामेश्वर थापाले पीडितका आँगनमा पुगेर भत्किएका घरको अवलोकन गरी त्यसपछिका दिनमा उनीहरूले भोग्नुपरेका समस्याका बारेमा जानकारी लिएका थिए।
उनीसँगै बहुराष्ट्रिय कम्पनी वेरन्ट सिस्टम इन्डिया प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक आशुतोष कर र प्रशासनिक निर्देशक राजन चाउला पीडितको आँगनमा पुगेका थिए।
मंगलबार अन्नपूर्ण राहत अभियानलाई शान्तिनगरस्थित हजुरको फ्रेस हाउसका सञ्चालक युवा व्यवसायी रामप्रसाद शाहीले उपलब्ध गराएको राहत सामाग्री ललितपुरको कार्यविनायक नपा १६ स्थित इखाफाँटका भूकम्प पीडितलाई बाँडिएको छ।
ललितपुर कार्यविनायक नगरपालिका १६ स्थित इखाफाँटका भूकम्पपीडितको आँगनमै पुगेर राहत सामग्री बाँड्दै अन्नपूर्ण राहत अभियानका टोली।तस्बिर : मनोज बस्नेत
माडवारी सेवा समाजले उपलब्ध गराएको राहत सामग्री काभ्रेको कुशादेवीमा बाँडिएको छ। बाँडिएका राहत सामग्रीमा चामल, चिउरा, दाल, नुन, तेल, चिनी, चियापत्ती, त्रिपाललगायत छन्।
पीडितले राहत वितरणमा राजनीतिक पूर्वाग्रह देखिएको गुनासो गरेका छन्। ‘राहतमा पनि राजनीति गरे’, ललितपुर इखाफाँटकी सफलता परियारले भनिन्, ‘यहाँ राजनीतिक पूर्वाग्रह गरेर सरकारले पठाएको राहत बाँडियो। जसको पहुँच छ। उसले मात्रै राहत पाए। हामी गरिबलाई कसैले दिएनन्।’
अभियानअन्तर्गत पीडितको आँगनमा पुगेर राहत बाँड्ने क्रम बढेसँगै सहयोग गर्ने दाता दैनिक थपिँदै गएका छन्। चीनको हलिमाले पन्जा २ बाकस र माक्स ३ बाकस उपलब्ध गराएको छ। जाउलाखेलकी एली थापा र बालुवाटारकी स्वेच्छा प्रधानले कपडा प्रदान गरेकी छन्।
डा. दीक्षितद्वारा सहयोग
काठमाडौं : नागरिक समाजका अगुवा डा. सुन्दरमणि दीक्षितले महाभूकम्प पीडितलाई राहतस्वरूप ‘अन्नपूर्ण राहत अभियान’लाई रकम हस्तान्तरण गरेका छन्।
रिपोर्टर्स क्लबमा मंगलबार आयोजित पत्रकारसम्मेलनमा डा. दीक्षितले अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कले भूकम्पपीडितलाई राहत अभियान सञ्चालन गरेकोमा प्रशंसा गर्दै दुई लाख रुपैयाँ सहयोग गरेका हुन्।
‘भूकम्पपीडितलाई राहतका लागि विदेशी दाता एवं अन्य निकायबाट पनि सहयोग आइरहेको बेला मलाई पनि केही सहयोग गर्न मन लाग्यो। नेपालीले नेपालीलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने सोचाइ सबैमा जागृत हुनुपर्छ। अन्नपूर्ण पोस्ट्ले पनि मैले दिएको रकमबाट राहत बाँडेर सहयोग गर्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु’, उनले भने।
श्री साई समाजसेवा निधिका अध्यक्षसमेत रहेका दीक्षित र सदस्यसचिव रहेकी उनकी पत्नी रेखादेवी दीक्षितले संयुक्त रूपमा रकम हस्तान्तरण गरेका हुन्।
दीक्षितले धादिङमा राहत वितरणका लागि क्लबलाई दुई लाख, नेपाल समाचारपत्र, राजधानी, टेलिभिजन च्यानल न्युज २४ र हिमालयन टेलिभिजनले संयुक्त रूपमा राहत प्रदान गर्न खोलेको ओम नेपाल इन्टिटीलाई तीन लाख, सिन्धुपाल्चोक र गोरखामा राहत वितरण गर्न हिन्दु स्वयंसेवक संघ नेपाललाई दुई लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेका छन्।
दीक्षितले भूकम्पमा घर गुमाएका ‘यस टेलिभिजन’का क्यामेरा म्यान रिकेश सिंहलाई २५ हजार रुपैयाँ दिने घोषणासमेत गरेका थिए।
ईपीएस परीक्षा सर्ने